News & Events | The Capital Center Mandalay
Available To Rent Best Promotion Area
လုပ်ငန်းရှင် မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ မိတ်ဆွေတို့ လုပ်ငန်းအတွက် Promotion Event ကျင်းပခြင်း၊ ဆိုင်ခန်းများ ငှားရမ်း၍ ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်း များအတွက် The Capital Center ကြီးအတွင်းရှိ Promotion Area ကို Read More
Hello Ladies! 🥰 ခုဆို အားလုံးလည်း အလုပ်ကိုယ်စီ ကိစ္စကိုယ်စီနဲ့ အပြင်ထွက်နေကြပြီဆိုတော့ အလှပြင် ပစ္စည်းလေးတွေ လိုနေလောက်ပြီပေါ့! ဒါ့ကြောင့် Capital ကနေ အမိုက်စား Beauty Fair ပွဲကြီးကို စီစဉ်ပေးထားပါတယ် 🎉 Brand တွေ အများကြီး Read More
Experience One Stop Shopping
မန္တလေးမြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့ နေရာမှာတည်ရှိပြီး Branded Fashion မျိုးစုံ၊ အားကစား ပစ္စည်းများ အပြင် အခြေခံလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဆေးဝါး နှင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို တစ်နေရာထဲမှာ လွယ်ကူစွာဝယ်ယူချင်တယ် ဆိုရင်တော့ The Capital Center ဆီကို အခုပဲ လာခဲ့လိုက်တော့ Read More
Social Distancing ကိုလိုက်နာပြီး ဈေးဝယ်ခြင်းအားဖြင့် ကာကွယ်လိုက်ကြရအောင်
Social Distancing ကိုလိုက်နာပြီး ဈေးဝယ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ တစ်ဦး တစ်ယောက်ထဲအတွက်သာမက ကျွန်တော်တို့ မိသားစု၊ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျွန်တော်တို့ ချစ်တဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီး ကို ပါ တစ်ဖက်တစ်လှမ်းမှ Read More
© 2022 The Capital Center Mandalay | All Rights Reserved.